Nezvedu - LumLux Corp Co., Ltd.
LumLux Corp.iri yepamusorosoro bhizinesi yakatsaurwa kune iyo R & D, kugadzirwa uye kutengesa kweHID uye LED kukura mwenje chigadziriso uye mutungamiriri uye zvakare ichipa greenhouse uye Plant fekitori yekuvaka mhinduro. Iyo kambani iri muPanyang Industrial Park, Suzhou, iri padhuze neShanghai - Nanjing mugwagwa mukuru uye Suzhou mhete yekumhanya uye ichinakidzwa neyakareruka stereo-traffic network.
Kubva pakagadzwa muna 2006, Lumlux yakatsaurirwa kune iyo R & D yeakakwira-kugona mwenje yekugadzirisa uye mutungamiriri muPlant yekuwedzera mwenje uye Ruzhinji magetsi. Zvirimwa zvekuwedzera zvigadzirwa zvemwenje zvakashandiswa zvakanyanya muEurope neAmerica uye zvakakunda musika wepasirese uye mukurumbira wepasirese weindasitiri yemwenje yeChina.
Iine fekitori yakajairika inovhara pamusoro pe20,000 mativi emamirimita, Lumlux ine vanopfuura mazana mashanu evashandi vehunyanzvi veminda dzakasiyana. Kwemakore, kuvimba nesimba rakasimba rebhizimusi, kusapera kugona kugona uye chigadzirwa chakanakisa, Lumlux anga ari mutungamiri muindastiri.
LumLux yanga ichinamatira kufilosofi yekupinza yakasimba maitiro ekushanda mune yega yega yekugadzira link, ine hunyanzvi simba rekugadzira yakanakisa mhando. Iyo kambani inogara ichivandudza maitiro ekugadzira, inovaka yepasirose kirasi kugadzirwa uye bvunzo mitsara, inoteerera kudzora kweakakosha mashandiro maitiro, uye inoshandisa RoHS mirau munzira dzese dzakatenderedza, kuti uone yemhando yepamusoro uye yakaenzana manejimendi manejimendi manejimendi.
Nekuvandudzwa kwekuvandudzwa kwemazuva ano kwekurima, LumLux ichaenderera ichisimudzira hunyanzvi hwebhizimusi hwe "kuvimbika, kuzvipira, kugona uye kuhwina - kuhwina", kushandira pamwe nevakabatana vakazvipira kumunda wekurima, ita nhanho dzeramangwana rakanaka nekurima kwemazuva ano.
chiono: Kushandisa Njere Simba Kupa Kugadzira Remangwana Riri Nani
Iva wepasi-kirasi akangwara magetsi ekugadzira mugadziri, achipa yakatsiga uye inoshanda akangwara magetsi magetsi zvigadzirwa uye masevhisi
Vanhu - vanotungamira vashandisi kutanga kugona kunosvika
Kuvimbika, Kuzvipira, Kubudirira, Kubudirira
Round Yakatungamirwa Kura Mwenje, Akatungamira Led Light Fixtures, Yakachena Kura Chiedza, Yakazara Spectrum Yakatungamirwa Mwenje,